Alaabta laalaabsanayo si loogu qurxiyo balakoonno aad u yaryar | Bezzia
Maria vazquez | 07/01/2022 18:00 | Qurxinta qurxinta
Intii aan xabsiga ku jirnay, kuweenna ku raaxaysan karay meel bannaanka ah oo gurigeenna ah waxaan dareemay nasiib badan. Xataa ka balakoonno aad u yar yar waxay noqdeen hanti yar. Oo waa taas alaabta guriga laalaaban Kuwani waxay noqon karaan kordhinta guriga.
Balakoonada guryaha Badanaa way yar yihiin laakiin taasi maaha caqabad in laga faa'iidaysto. Ma qiyaasi kartaa naftaada markaad kafeega cabto subaxdii xilliga xagaaga? Fadhiga fiidkii akhriska? Ku raaxaysiga cashada lamaanahaaga? Waxa aad ka dhigi kartaa in aad dhigto dhawr qaybood oo alaabta guriga ah.
1 Alaabta isku laabma
2 Alaabta guriga ee muhiimka ah
3 Isku dar iyaga ...
Alaabta isku laabma
Alaabta isku laabma ayaa ah beddel weyn oo lagu qurxiyo balakoonooyin aad u yaryar. Kuwani maaha oo kaliya, guud ahaan, iftiin, laakiin sidoo kale waa noo oggolaadaan dib u habaynta booska si fudud marka loo baahdo. Laalaabku waxay qaadanayaan meel aad u yar, taas oo kuu ogolaan doonta inaad si kale u isticmaasho booska. Laakiin kuwani maaha faa'iidooyinka kaliya ee noocan ah alaabta guriga sida aad hoos ku ogaan karto.
Waa alaab guri oo fudud; miisaankoodu waa yar yahay oo muuqaal ahaan waxay qaataan meel yar.
Waa la laalaabi karaa oo la ururin karaa si fudud markaan u baahanahay inaan booska si kale u isticmaalno ama si fudud ugu diyaarino jiilaalka.
Waa kuwo raqiis ah.
Alaabta guriga ee muhiimka ah
Waa maxay alaabta laalaabida ee lagama maarmaanka u ah balakoonka? Baahida qof kasta ama qoys walba waa kala duwan yihiin, laakiin waxaa jira laba qaybood oo alaab guri ah oo dhif ah inay soo galaan jidka balakoonka iyagoo ka dhigaya meel aad u shaqeysa. Waxaan ka hadlaynaa dabcan miisaska iyo kuraasta.
Una miis laablaaban oo wareegsan waa mid mar walba soo dhawaynaysa. Oo...maxay macno samaynaysaa in la dhigo miis aan ugu yaraan laba kursi ku wareegsanayn? Qaabka noocaan ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso hawlo badan oo dibadda ah: kafee, wax cun, akhri, shaqeyso ... oo la samee qof kale.
Ma haysaa meel aad u yar? Ku sharad a miis wareeg ah in aad ku dhejin karto biraha ama derbiga oo aad ku beddesho kuraastii kursi ku yaal dhinaca balakoonka. Waxaa laga yaabaa inaadan ku habboonayn laba kursi laakiin kursi laba qof qaadi kara. Ma dhigi kartaa miis leydi ah? Haddii booska balakoonkaagu kuu ogolaado oo aad awoodo inaad wax ku cuntid oo aad dibadda wax ku cuntid waa mudnaanta adiga, ha ka walaacin!
Ku sharad miis iyo kuraas ka samaysan qalab ku habboon meelaha bannaanka ah. Qalabka si fiican u taageera Cimilada sii korodho sida birta, fiilooyinka synthetic ama alwaaxyada kulaylaha sida teak.
Isku dar iyaga ...
Un Kursiga shaqada ama laga dhaafo kaydinta weligood kuma badna balakoonka. Kuraasta waxa aad ku fadhiisan kartaa dad ka badan inta aad ku fadhiisan karto kuraas la mid ah kan midkaan. Haddii aad ku dhejiso gidaarka oo aad gogosha dhigto, waxaad sidoo kale nasan kartaa wakhti kasta oo maalinta ah.
Muhiimadaadu ma tahay inaad hesho meel aad ku seexato oo aad ku nasato? Markaa waxaa laga yaabaa inaad door bidayso inaad fadhiiso fadhiga oo aad illowdo miiska iyo kuraasta haddii aadan haysan meel tofo ah. Ku sharad fadhiga koonaha oo ku dhammaystir fadhiga miiska qaxwada laablaaban. Waxay kuu adeegi doontaa inaad kafeega cabto ama aad cunto cunto fudud oo fudud.
Ma doonaysaa in aad ka dhigto meel bannaan oo soo dhawayn leh? Haddii aadan jeclayn sagxada balakoonkaada ama ay xaaladdeedu liidato, maxaad u raacin a madal qaabaysan? Aad bay u fududahay in la dhigo; dhawr jeer oo fudud oo kaliya. Oo haddii balakoonkaagu uu aad u yar yahay, qiimahu cirka ma kici doono. Waxaa lagu qiimeeyaa inta u dhaxaysa € 16 iyo € 23 mitirkiiba. Sidoo kale dundu waxay kaa caawin doontaa diirimaad.
Ha iloobin lagu daro dhirta qaarkood. Kuwani waxay keenayaan cusub iyo midab balakoonka. Oo, waxay kuxirantahay dhirta aad doorato iyo meesha aad dhigto, waxay xitaa ku siin karaan qarsoodi weyn. Ku sharad muunado dayactir hooseeya oo joogi kara sannadka oo dhan oo aan lahayn baalal ballaadhan si aanay u xadin meel aad u badan.
Qurxinta balakoonno aad u yar oo leh alaab guri oo laablaaban waa mid aad u fudud oo aan qaali ahayn. Bal u fiirso qaar oo diyaari balakoonka ka hor inta aanu gu'gu iman si aad u bilowdo ka faa'iidaysiga sida ugu dhakhsaha badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qurxinta qurxinta » Alaabta isku laabma si ay u qurxiyaan balakoonno aad u yar yar
4 daawo dabiici ah oo lagu daweeyo madax xanuunka